Sidee Loo Baaraa Uric Acid Ka Kujira Dhiigga? |
Uric acid ka marka la rabo in la baaro waxa habboon in bukaanka uusan waxba soo cunin ama muddo afar saacadood inuusan wax cunin sidoo kale waxa jira waxyaabo u keeni kara qaladaad baaritaanka aad samaynayso sida haddii uu qofka soo cabo alcohol ama uu soo isticmaalo daawooyinka qaar sida asprin-ta ibuprofen kuwaani waxay dhibaato u keenayaan nadiijada aad soo saarayso uric acid-ka dhiigga iyo kaadidaba waa laga baari karaa.
Goormee bukaanka laga baari karaa uric acid-ka?
Bukaanka waxaa uric acid-ka laga baari karaa marka aad uga shakiso inuu qabo cudurka loo yaqaano gout, astaamaha lagu garto cudurkaan waxa ka mid ah inuu xanuun ka dareemo isgalada lafaha ama ay soo bararaan isgalada lafaha, waxa kaloo looga shakin karaa inuu qabo kelliyo xanuun ama in ay kelliyaha dhaggax uga jiraan qofka isticmaala daawooyinka kansarka waxaa loo diraa baaritaankaan sababtoo ah qofka qaba kansarka uric acid-kiisa wuxuu noqdaa mid kor u kaca intaan xaalladood marka lagu arko bukaanka waxa loo diraa baaritaankaan si loo ogaado heerka uu gaarsiisan yahay uric acid-ka ku jira dhiigga.
Marka aad ku baareyso uric acid-ka semi-automatic machine waxaa soo diyaarsanee seddax dhalo ama glass test tube mid walba waxa u samaynee sumad lagu garto sidoo kale waxa soo diyaarsanee daawooyinka lagu baaro uric acid ka laakin shirkadaha soo saara daawooyinka waa ku kala duwan yihiin sababtoo ah qaar waxay soo saaraan ayagoo diyaarsan qaarna waxay soo saaraan ayagoo laysku qasaayo.
Marka hore waxaad soo diyaarsanee qalabka aad u baahan tahay sidda.
Semi-automatic analyzers waa qalabka lagu baaro dheecaannada ku jira jirka bani’aadamka noocyadooda kala duwan sida dheecaanka beerka, dheecaanka kelliyaha, dufanta jirka ku jirta iyo sidoo kale macdanta ku jirta guud ahaan jirka bani’aadamka.
Centrifuge waa qalab lagu kala dejiyo wax walbo oo dareera ah sida dhiigga iyo kaadida.
Plain tubes: waa dhalo fur-gaduudan leh oo lagu shubo dhiigga.
Pipette: waa qalab lagu soo qaado dhiigga hadba inta aad rabto ayaa kusoo qaadan kartaa noocyo badan ayaa jira mid walba wuxuu soo qaadaa cabir gaar ah mid wuxuu soo qaadi karaa 100—1000 µl midna wuxuu qaadi karaa 10– 100 µl.
Gloves: waa gacmo gashi loogu tala galay in uu kaa difaaco jeermiska.
Glass test tube: waa dhalo aan wax calaamad ah aan lahayn
Timer: waa sacaad yar oo loogu tala galay in waqtiga lagu fiirsado inta ay hoosha socoto
Reagents: waa daawooyin loogu tala galay in lagu baaro baaritaan kasta oo aad samayneyso waxaa u baahan tahay daawo u gaar ah uu dhiigga qaadaayo ilmaha yar yar waxa loo isticmaala cirbido yar yar sida lancet ka oo kale.
Waxaad soo diyaarsanee seddax dhalo adigoo u samaynaayo seddax magac oo kala ah standard, blank iyo sample dhalo kasta waxaa ku shubbaysaa daawada (reagents) oo loogu tala galay in lagu baaro uric acid-ka ku jirra dhiigga dhalo kasta waxa ku shubbaysaa 1000 µl, machein-ka marka aad kiciso ama shido wuxuu ku waydiinaa wax loo yaqaano standard iyo blank, standard-ka wuxuu la socdaa daawada wuxuu ku jiraa caag yar standard-ka waxa ka soo qaadanee 25µl dhiigga aan midabka laheyn waxa kasoo qaadanee asigane 25µl, marwalba waxa raaceysaa tilmaamaha ku qoran warqada ku jirta daawada (leaflet).
Dhalo kasta waxaa ku jira waa isku qasee kadib waqti ayaad u qabanee ilaa iyo 15 daqiiqo ayaad sugeysaa kadib machein-ka ayaad la tagee hadba midka ugu soo horeeyo ayaad siineysaa, macnaha machin-ka wuxu ku waydiinaa blank ama standard midka uu ku waydiiyo ayaa siinaysaa kadib sample-ka ayaa siinaysaa.
Qofka sheybaariistaha ayaa dhiigga ka qaaddaayo qofka bukaanka ah asigoo si wanaagsan ula hadlaayo qofka bukaanka ah gacanta bidix ama midigta midka uu rabo ayuu ka qaadi karaa dhiigga asigoo isticmaalaayo jeermis dile (Alcohol) marka Standard-ka uric acid-ka waa 5.0 mg/dl standard-ka wuxuu marwalba ku tilmaamayaa in ay daawada tahay mid shaqeynaysa iyo in kale. Waa sida loo diyaariyo uric-acid-ka waxaa jira qaabab kale oo ka duwan qaabkaan marwalba waxay ku xirantahay waxa ku qoran warqada kutimaada daawada in la aqriyo (leaflet).
Shaxdaan waxay kuu tilmaamaysaa sida loo diyaariyo uric acid ka.
Sida layskugu Dhalada Dhalada Dhalada 3aad
daro. 1aad 2aad Sample/serum
Cabbirka saxda ee laga rabo ragga iyo dumarka waa kula duwan yihiin ragga waxa laga rabaa inuu gaaro 3.5 ilaa iyo 7.2 mg/dl halka dumarka qaan gaarka ah ay ka yihiin 2.6 – 6.0 mg/dl.
Tags: Sidee Loo Baaraa Uric Acid Ka Kujira Dhiigga?
Next post Dareen Qabiil iyo Dawlad Qaran La Isku Waa !!!
Previous post Siddee Loo Baara Creatinin-ta Kujirta Kaadida?